Usizo lwabenza imisenenzi lokusetshenziswa kwezokwelapha olulahlwayo I-Vaginal Dilator Set Manufacturer and Supplier | UShengbo
Ukusetshenziswa kwezokwelapha okulahlwayo kwe-Vaginal Dilator Set
Uhlobo Lokukhipha Amagciwane: EO
Usayizi: I-SML, i-SML
Impilo eshalofini: iminyaka engu-2
Isitifiketi sekhwalithi: IS0
Sebenzisa: Okwe-gneological exemintin
Izinga lokuphepha: IS0
Thayipha. I-specul dilator ye-Vaginal elahlwayo
Amasampula: Amasampula wamahhala ayatholakala
Ikhwalithi Werranty. 2 unyaka
1. Ngesikhathi sokuhlolwa, udokotela uqale afake amagilavu ​​angenanzalo futhi aphathe i-dilator yesitho sangasese sowesifazane ngesandla esisodwa, bese udokotela ezohlukanisa ngobumnene i-labia minora yezandla ngezandla zakhe ukuveza ngokuphelele isitho sowesifazane sowesifazane.
2. Emva kokuhlukanisa isitho sangasese sowesifazane, beka i-dilator yesitho sangasese sowesifazane esithweni sangasese, ikakhulu eceleni kwesitho sangasese sowesifazane. Umugqa oqondile nobubanzi obujikayo be-dilator yesitho sangasese sowesifazane busezingeni elingu-zero. Kancane kancane faka i-dilator yesitho sangasese sowesifazane kuyo, bese uhlukanisa kancane kancane izingobe ezingenhla nezingezansi zelebula.
3. Emva kokubuka udonga lwesitho sangasese sowesifazane nezinye izicubu, khipha ngobumnene i-expander sangasese esithweni sangasese ukuze ugweme ukulimaza izicubu ezithambile eziseduze kwaso. Ngokuvamile, ngemuva kokukhipha i-dilator yesitho sangasese sowesifazane, udokotela uzobhucunga ngobumnene isitho sangasese somhloli ngezandla zakhe. Ngaphambi kokufaka i-dilator yesitho sangasese sowesifazane, i-perineum idinga ukubulawa ngegciwane nge-iodophor ukugwema ukuhlasela kwamagciwane.
Lo mkhiqizo wakhiwa ngeqabunga eliphezulu, iqabunga eliphansi nesibambo. Yenziwe ngepulasitiki engeyona enobuthi, esobala futhi eguquguqukayo. Ubuso balo mkhiqizo bushelelezi, i-arc peripheral ibushelelezi, ngaphandle kwemiphetho ebukhali, ayikho i-burrs, futhi ngeke kube khona imikhondo yempuphu noma amanzi. , Wonke amagiya angalungiswa futhi anwetshwe kalula ngaphandle kokuminyana. Ngemuva kokuvala inzalo ye-ethylene oxide, akukho ukucasuka kwe-intradermal futhi akukho ukubambezeleka okubambezelekile.
Olandelayo: Enteral yokudla tube
Alahlwayo Degreased Oyinyumba Medical Ukotini Gau ...
I-Nasal Oxygen Tube
I-piston yombala wesirinji
I-Medical Non-woven Transfer Pad
Test Oyinyumba alahlwayo Sebenzisa Plastic Medical Spe ...